Ungavumeli Noma ubani ukuba asebenzise ikhompyutha yakho yedivayisi! - Misa ama-Botnets nge-Semalt
Inethiwekhi ye-robot noma i-botnet yiqembu lama-computer we-zombie noma amabhubhu alawulwa yi-spammers futhi aphethe amadivaysi amaningi. Ama-Botnets cishe ayoba amanethiwekhi asemthethweni amadivayisi wekhompyutha asebenzisana nezinhlelo ezifanayo noma iqembu lamakhompyutha aphethwe amagciwane kanye ne-malware. Uma efakwe kumadivayisi wakho wekhompuyutha, ikakhulukazi ngaphandle kolwazi lwabasebenzisi, ikhompyutha yakho iyoba i-zombie, i-drone noma ikhompyutha ngesikhathi esithile. Ngeke isebenze kahle futhi ngeke imelane nezilawuli zabalawuli be-bot. U-Frank Abagnale, i-8 (Semalt uMenenja weNtuthuko YeKlayenti, uchaza ukuthi ngaphansi kwezimo ezinjalo, izinhlelo zokulwa ne-malware noma isofthiwe ye-antivirus kumele inikwe amandla ngokushesha.
Ama-botnets ahlukahluka ebucayi nasezingeni, ezinye zazo zinkulu ngenkathi ezinye zincane. Ama-botnets amakhulu anezinkulungwane zeZombie ngabanye, kanti ama-botnets amancane angaba namakhulu ambalwa kuphela ama-drones noma ama-zombies. AmaBotnets atholakala kuqala ngoJulayi 2010, lapho i-FBI ibamba insizwa encane yeSlovenia. Ubekwa icala ngokusabalalisa izinto ezinonya ezinkulungwaneni zamadivayisi wekhompyutha. Ngokwesilinganiso, amakhompyutha ayizigidi ezingu-12 aphethwe yi-botnets. Kunezinhlobo ezahlukene ze-bots ezinonya, ezinye zazo zingakwazi ukuthelela amadivayisi wekhompyutha ngendlela efanayo namagciwane noma i-malware.
> Amabhunetshi asetshenziswa ngezindlela ezihlukahlukene, ezinye zazo ezichazwe ngezansi:
Ukulahlwa Kwezinsizakalo Zesevisi:
Ama-Botnets asetshenziselwa ukuqalisa ukuhlaselwa kwidivaysi ethile yekhompyutha noma inethiwekhi nokuphazamisa izinsizakalo ngokuphanga izixhumanisi. Ngaphezu kwalokho, badla umkhawulokudonsa wenethiwekhi yakho futhi balayisha ngaphezulu izinsiza zesistimu. Ukuhlaselwa Kwezinsizakalo Zokusebenza (DoS) kuvame ukusetshenziswa ukubhubhisa isayithi lomncintiswano.
Ugaxekile Nokuqapha Kwemoto:
I-botnet isetshenziselwa ukuthelela i-protocol ye-TCP / IP yedivayisi yekhompyutha futhi isebenzise izicelo zayo ezithile. Ama-botnets asetshenziselwa ukuxubana ngeZombies eziningana kanye namagciwane futhi avune amakheli e-imeyili. Bathumela idatha enkulu yohlelo logaxekile nama-imeyili wokubamba ngobugebengu kwabahlukunyezwayo. Ngokujwayelekile, ama-zombies kanye ne-bots asetshenziselwa ukukhohlisa igama lomsebenzisi nephasiwedi yomsebenzisi ukuze ibhodlela likwazi ukulawula imisebenzi yalo nokuyixhaphaza.
Izinhlelo zokubethela emakhompyutheni akho zenzelwe ukuthola i-bots futhi zivimbele ekuvuneni noma yiluphi uhlobo lwolwazi. Kuyadabukisa kakhulu ukuthi ama-botnets asetshenziselwe ukuguqula ukuphepha futhi afaka izinhlelo ze-keylogger kumishini enegciwane. Ama-Keyloggers asiza ibhola ukulawula nokuhlunga izinhlelo zedivayisi yekhompyutha, esetshenziselwa ukuphanga i-ID ye-PayPal yomuntu noma imininingwane yekhadi lesikweletu.
Ama-Botnets asetshenziselwa ukusakaza nokusabalalisa izinhlobo ezahlukene zegciwane namabhodlela kunethiwekhi. Babamba abasebenzisi emisebenzini enonya bese benza amakhompyutha abo kanye nama-ID we-imeyli. Uma uchofoza ohlelweni lokuchofoza ngokukhokha, ama-botnets angafinyelela imininingwane yakho yezezimali. Ama-Zombies asetshenziselwa ukuxhaphaza ulwazi lomsebenzisi ukuze athole imali kusuka kuma-system-pay-per-system Source .